Vaovao - YALIS Nandray anjara CIDE 2021
CIDE 2021 dia teto araka ny fandaharam-potoana, YALIS indray dia nitondra vokatra vaovao isan-karazany
Ho avy ny Ara amin'ny fanamboarana trano iray manontolo
Miaraka amin'ny fanatsarana ankapobeny ny haavon'ny fanjifana sy ny fanavaozana tsy tapaka ny foto-kevitry ny fanjifana, ny fanamboarana trano manontolo dia lasa zava-misy tsy azo ovaina amin'ny fanjifana isan-tokantrano. I Shina dia firenena manana fanorenana vaovao be dia be eran-tany, mitentina eo amin'ny 40% amin'ny fanorenana vaovao eran-tany isan-taona. Ny China International Door Industry Exhibition (CIDE) dia fantatra amin'ny anarana hoe "vane sy booster ny fampandrosoana ny indostria", izay nampiroborobo be ny fifanakalozana indostrialy sy ny fiaraha-miasa ara-barotra. Izy io dia mpanentana sy vavolombelon'ny firoboroboan'ny indostrian'ny varavarana sy ny tsena an-trano namboarina.
Tamin'ny 6 Mey 2021, dia nosokafana tamin'ny fomba tsara izy io tao amin'ny Foiben'ny Fampirantiana Iraisam-pirenena Shina Tianzhu Hall, Beijing. Nisy fanavaozana tsara ny fampirantiana. Ny faritra fampirantiana dia mizara ho sehatra fampirantiana lohahevitra lehibe toy ny fanamboarana trano iray manontolo, trano marani-tsaina, varavarana hazo (varavarankely), fitaovana, ary fitaovana famokarana manan-tsaina, izay afaka mifantoka bebe kokoa amin'ny rojo indostrialy ambony sy ambany, ary mampiroborobo ny fampirantiana sy ny mpitsidika.
Amin'ny maha-namana taloha an'ny CIDE, YALIS mazava ho azy fa tsy ho tonga. Tamin'ity fampirantiana ity dia mbola nalaza ny trano heva YALIS. YALIS dia niomana tsara ary nitondra vokatra vaovao isan-karazany, anisan'izany ny vahaolana amin'ny fitaovana varavarana, ny kojakoja fitaovana amin'ny varavarana ary ny hidin-trano marani-tsaina. Tantanam-baravarana vaovao maro no misongadina amin'ireo marika fitaovana maro amin'ny endrika endrika avo lenta, atmosfera ary avo lenta, mahasarika fampirantiana sy mpividy maro mba hijanona ho traikefa sy fifanakalozana lalina.
Zava-nisongadina maro tamin'ny fampirantiana
Miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny fari-piainan'ny olona dia mihamitombo hatrany ny fepetra takiana amin'ny haingon-trano, ary ny varavarana anatiny dia mivoatra tsikelikely mankany amin'ny maha-olombelona sy ny fahasamihafana. Avy amin'ny varavarana hazo mivaingana tany am-boalohany sy ny varavarana fitaratra, ny varavarana tsy hita maso, ny valin-drihana varavarana avo, ny profil varavarana, manify rafitra fitaratra fitaratra sy ny sisa. Noho izany, nanosika ny indostrian'ny hardware hanao fanovana mifanaraka amin'izany ihany koa. YALIS dia namolavola vahaolana mifanaraka amin'ny fitaovana varavarana ho an'ny varavarana samihafa, izay tsy vitan'ny hoe mampitombo ny vidin'ny vokatra vita amin'ny varavarana avo lenta, mampitombo ny vokatra azo ampiharina amin'ny varavarana, fa mahafeno ny filan'ny mpanjifa ihany koa.
Ohatra, ho an'ny varavarankelin'ny fitaratra manify, ny famolavolana varavarana fitaratra eny an-tsena ankehitriny dia tsy mahafeno ny filan'ny mpanamboatra varavarana fitaratra. Tamin'ny alalan'ny fikarohana be dia be ny tsena, YALIS nianatra fa ny mpanamboatra varavarana fitaratra manana teboka fanaintainana eo amin'ny fifantenana ny fitaratra hidin-trano, toy ny sarotra fampifanarahana ny anatiny rafitra, vitsivitsy safidy, ary sarotra ny mifanandrify ny fomba. Noho izany, YALIS dia nanapaka ny fomban-drazana ary nanamboatra andiany NO.292 fitaratra hidin-trano, NO.272 fitaratra varavarana hidin-trano andian-dahatsoratra sy ny varavarana fitaratra hidin-trano hafa, natambatra ny fonctionnaire sy ny zavakanto aesthetics ny fitaovana sy ny fitaratra varavarana ho iray, tena namerina ny mangarahara sy avo- firafitra faran'ny varavarana fitaratra manify.
Ho an'ny varavarana hazo, ny hidin-trano mitantana varavarana izay azo ampifandraisina tsara amin'ny fitaovana sy loko isan-karazany amin'ny varavarana mba hanatsarana ny fiantraikan'ny maso amin'ny ankapobeny dia safidy mafana eny an-tsena. Noho izany, YALIS vao natombokahamaroan, Rainbow, tana ary andiana hidin-trano hafa.
Mazava ho azy fa ankoatra ireo hevi-dehibe nampidirina etsy ambony, ity fampirantiana ity dia hampiseho karazana vokatra vaovao sy rafitra vaovao. Amin'ny alalan'ny CIDE, mahazo tsara kokoa ny filan'ny mpanjifa izahay, ary matoky kokoa amin'ny ho avy. Manantena ny hihaona aminao amin'ny manaraka!
Fotoana fandefasana: May-14-2021